မြန်မာပြည် ရေရှည်အတွက် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီဟာ အကောင်းဆုံးပဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
CNN ။ ။ ဒေါ်စုအနေနဲ့ နယ်ဆင်မင်ဒဲလားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခံရမှုမျိုးတွေကို စဉ်းစားမိပါသလား။ ကမ္ဘာကြီးကို မင်ဒဲလား သင်ပြပေးခဲ့ တာက ”ခွင့်လွှတ်ခြင်း” တရားလို့ ထင်ပါတယ်။ သူက သူ့ကို (၂၅) နှစ်ကျော် မတရားထောင်ချထားခဲ့သူတွေအပေါ် ခွင့် လွှတ်ခဲ့တယ်လေ ။
SUU ။ ။ (ရယ်လျက်) လူတွေက ကျမကို ”ခွင့်လွှတ်ခြင်း” ဆိုတဲ့ကိစ္စအကြောင်းကို မေးတတ်ကြတယ်။ ကျမ အမြဲရှင်းပြပါ တယ်…..ခွင့်လွှတ်တယ်၊ မလွှတ်ဘူးဆိုတာ ကျမလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လည်း ကျမမှာ နာကျည်းခါးသီးတဲ့ ခံစားချက်ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒါက ကျမရဲ့ သိပ်ကိုကံကောင်းတဲ့အချက်လို့ဘဲ ထင်ပါတယ်။ မွေးရာပါဆိုတာမျိုးလည်း ဖြစ် နိုင်ပါတယ်။ ဘဝအပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားအမြင်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ကျမအပေါ် (လူတွေက) ဘယ်လိုလုပ် သွားကြ တယ်ဆိုတာတွေကို ကျမ သိပ်မှတ်မထားတတ်ဘူး။ ကျေးဇူးတရားကိုတော့ နက်နက်နဲနဲ ခံစားတတ်တဲ့ စိတ်ရှိပါ တယ်။ ကျမအတွက် ကောင်းတာလေးတစ်ခုခုကို လုပ်ပေးခဲ့ဖူးသူတယောက်ကိုမှ ကျမ မမေ့ပါဘူး။ မမေ့အောင်လည်း ကြိုးစားပါတယ်။ သူများက ကျမတို့အပေါ် ပြုမူသွားတဲ့ မကောင်းမှုကို ကျမအကြာကြီး တွေးမနေတတ်တာ ကျမကံကောင်း တယ်လို့ဘဲ ထင်ပါတယ်။ ကျမတစ်ယောက်တည်းအပေါ် လုပ်တာမျိုးတင်မဟုတ်ဘဲ ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ဘယ်သူက ဘယ်လိုလုပ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်း ကျမ အကြာကြီး တွေးမနေတတ်ပါဘူး။
CNN ။ ။ ပြီးတော့ ဖယ်ပစ်မယ်ပေါ့ … .. တချို့သော…..? ။
SUU ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာက လွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ကမှ စတာပါ။ ပြီးတော့ ကျမတို့လိုချင်တဲ့ အချင်းချင်းသဟာဇာတဖြစ်မှု၊ နားလည်မှုနဲ့ သဘောထားကြီးသည်းခံမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့လုပ်ရတာ အခက်အခဲ အ များကြီးရှိပါတယ်။ ဒေါက်တာကိုဖီအန်နန်ဦးဆောင်တဲ့ကော်မရှင်ကို ကျမတို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ဆိုတာ ကြားမိမှာပါ။ ရခိုင်ပြည် နယ်က ပြဿနာတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ၊ (ရှင်တို့) တလျှောက်လုံး မေးနေတဲ့အခုလို မေးခွန်းမျိုးတွေကို သွားရောက်မေးမြန်းအဖြေရှာဖို့ပါ…. ပြသနာတွေက ဘာလဲ၊ ဘာလို့ ဒါတွေဖြစ်ရတာလဲ ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ မမေ့ပါနဲ့ဦး။ ဒါက ကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တစ်ခုတည်းသော ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို ကျမအခုလို ပြောခွင့်ရချိန်မှာ တခါတည်း ပြော ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခုကိုဘဲ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက အာရုံစိုက်နေခဲ့ကြတယ်။ ဒီ (ကိုဖီအန်နန်ဦးဆောင်တဲ့) ကော်မရှင်ကို ကျမတို့ဖွဲ့တော့ နိုင်ငံရေးပါတီတော်တော်များများက ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်။ အခုလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆန့်ကျင်နေကြတုန်းပါဘဲ။ ဒီတော့ ဒါက အခက်အခဲတွေ ဒင်းကြမ်းပြည့်နေတဲ့ အတက်လမ်းပါဘဲ။ ကျမတို့အတွက်လည်း ဒါက စဉ်းစားရကျပ်တဲ့ကိစ္စပါဘဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ မတူကွဲပြားမှုတွေအပေါ်မှာ သဘောထားအကြီးဆုံးဘာသာတရားဖြစ်ရက်နဲ့ ဘယ်နှယ်ကြောင့် ကျမတို့တတွေ ဒီလိုသည်းမခံနိုင်ဖြစ်နေရသလဲဆိုတာကိုပါ။